Native Kushambadzira Mune Zvemukati Kushambadzira: 4 Matipi Uye Matipi | Martech Zone
Native Kushambadzira Mune Zvemukati Kushambadzira: 4 Matipi Uye Matipi
Chipiri, Kurume 24, 2020 Chipiri, Kurume 24, 2020 Alice Jones
Zvemukati kushambadzira zviri kwese kwese uye kuri kuwedzera kuoma kushandura tarisiro kuva yakazara-nguva vatengi mazuva ano. Bhizimusi chairo harigone kuwana chero chinhu nemaitiro akabhadharwa ekusimudzira, asi rinogona kubudirira kusimudzira kuziva uye kutyaira mari uchishandisa kushambadzira kwazvino.
Iyi haisi pfungwa nyowani munzvimbo yepamhepo, asi mabhureki akawandisa achiri kukundikana kuishandisa zvizere. Ivo vari kuita kukanganisa kukuru sezvo kushambadzira kwemuno kunoratidza kuve imwe yemabhenefiti ekusimudzira matekiniki ayo anenge anoda kuvimbisa kuendesa kudzoka kwaunoda pane kudyara.
Asi zvinoshanda sei? Iwe unogona kuita chiyero chakakodzera pakati peyekushambadzira kwemuno uye kushambadzira zvemukati? Kana iwe usina chokwadi chaizvo kupindura iyi miviri mibvunzo, ramba uchiverenga kuti udzidze izvo zvakakosha zvimiro zvekushambadzira kwazvino mukushambadzira kwemukati.
Haisi chakavanzika chekuti kushambadzira zvirimo kuri kutonga dhijitari, asi ko zvakadii kushambadzira kwemuno? Kana iwe uchinyatsoda kuziva kuti zvinoshanda sei, iwe unofanirwa kunzwisisa zvazvinoreva uye tarisa iwo ekutanga matanho mune ino ndima.
Kushambadzira kweNative iko kushambadzira kwakabhadharwa kunoenderana nekutaridzika, kunzwa, uye mashandiro emidhiya fomati mavanowanikwa. Iwe unowanzoona kushambadzira kwemuno sezvikamu zvezvinhu zvako zvemagariro enhau kana kune ako mawebhusaiti aunofarira sekurudziro yechinyorwa.
Native Kushambadzira Statistics
Aya mafomati ezvinyorwa akafanana neakajairwa edhisheni sarudzo yeakapihwa kutaurirana chikuva. Izvi ndizvo chaizvo zvinoita kuti kushambadzira kwemuno kushande uye kuvimbike:
Native kuratidza kushambadzira kunogadzira iyo yekudzvanya-kuburikidza chiyero (CTR) 8.8 nguva yakakwira kupfuura yakajairwa kuratidza ma ads.
70% yevatengi zvirinani kudzidza pamusoro pezvigadzirwa kuburikidza nezviri mukati pane zvetsika kushambadzira.
Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevashandisi zvinowana akakurudzira zvemukati kuti ive iyo inonyanya kubatsira fomu yekushambadzira yemuno.
Vashambadziri veUS vanopedza vangangoita $ 44 bhiriyoni pane zvizvarwa zviziviso pagore.
Bhenefiti yeNative Kushambadzira mune Zvemukati Kushambadzira
Kushambadzira kwevanhu venyika kuri pachena kuti kune simba, asi iwe unofanirwa kuziva kuti inouya nehupamhi hwezvakanaka zvinobatsira. Heano mabhenefiti akakosha ekushambadzira kwemuno mukushambadzira zvemukati:
Zviziviso zvechizvarwa hazvivhiringidze: Kusiyana nemamwe mafomu ekusimudzira, zviziviso zvemuno zvinoshamisika uye hazvishambadzi. Seizvo zita rinoratidzira, kushambadzira kwakadai kunoratidzika kunge kwakasikwa uye kwehupenyu, izvo zvinoita kuti vafarirwe kupfuura mabhana emabhana kana popups.
Zviziviso zvechizvarwa zvakavimbika: Vanhu vanowanzo funga mashambadziro emuno kuva akavimbika uye akavimbika. Hazvishamise, kunyanya kana iwe ukagadzira musanganiswa wakakwana wekushambadzira uye zvemukati kushambadzira. Mune ino kesi, iwe unogona chete kufadza vateereri neyakajeka promo yezvinyorwa.
Yakakwirira CTR: Native ads vane yakanyanya kudzvanya-kuburikidza chiyero (CTR) pane akajairwa kushambadzira mafomu, inova mhedzisiro yekuvimbika kwavo uye kuvimbika. Rudzi urwu rwekushambadzira harusi rwekumanikidza zvakanyanya, saka vashandisi havana basa nekushandisa zvirimo uye nekuita nazvo pakupedzisira.
Native ads inoshambadza munhu wese: Musanganiswa wekushambadzira kwemuno uye zvemukati zvemukati zvinokodzera munhu wese anobatanidzwa mubhizinesi. Vatengi vanochida nekuti chinopa zvemukati zvemukati, nepo vaparidzi vachizvifarira nekuti hazvipindirani nezvakagadzirwa. Chekupedzisira, vashambadziri vanoda chiziviso chekuzvarwa nekuti chinopa mhedzisiro yakanangwa.
Kushambadzira kweNative kunokodzera mapuratifomu ese: Unogona kushambadzira zviziviso zvemuno pane chero chiteshi chekutaurirana chiripo. Kubva pamasocial media nemawebhusaiti kumagazini echinyakare nemabhurocha, kushambadzira kwemuno kunoshanda kune vese masvikiro.
4 Nzira dzekuvandudza Native Ads
Iye zvino zvaunonzwisisa zvakakosha zvinhu zvekushambadzira kwazvino, chinhu chete chasara kudzidza kuti ungazvibatanidze sei neako wekushambadzira kushambadzira. Isu tinokugadzirira iwe runyorwa rweane anoshanda matipi uye manomano:
Zano # 1: Zviite nevateereri vari mupfungwa dzako
Mutemo wekutanga wekushambadzira kwemuno haufanire kunge uri we-brand-centric uye kunyora nevateereri vateereri mupfungwa dzako. Usakanganwa kuti shambadziro yepamusoro yemuno haina chero chinhu kunze kwezvakanyanya zvidimbu zvemukati zvinokurudzira vaverengi kushingairira uye mhando.
Basa rako nderekuongorora zvido zvezvaunotarisira uye wotarisa pazvinyorwa zvinoenderana nezvavanotarisira, tariro, zvavanoda uye zvavanotenda.
Jake Gardner, an basa rekupa at nyanzvi dzekunyora masevhisi, inoti zvakakosha kunzwisisa kuti vatengi vanozviona sei pamusoro penyaya yakapihwa: “Edza kuona matambudziko avanotarisana nawo. Nenzira iyoyo, unogona kugadzirira zvemhando yepamusoro zvinokurudzira vanhu kuti vatore matanho pakuverenga. ”
Panguva imwecheteyo, iwe unofanirwa kufunga nezvenzira dzakanakisa dzekugovera. Iwe unoda here kuratidza kushambadza kuburikidza nesocial network kana kuenda nemapeji akakurudzirwa? Kurudziro yedu ndeye kushandisa chiteshi chaunoziva kuti chinogona kusvika kune vako vateereri kunyanya.
Zano # 2: Gadzira standout makopi
Vazhinji vashambadziri vanoona zano rechipiri sekukosha sezvo richiita musiyano wese pakati pemakampeni akabudirira uye kushambadzira kushoma. Sezvinei, iwe unofanirwa kuita zvese zvinotora kugadzirira standout kopi kune yega yega shambadziro wega.
Chekutanga pane zvese, zvirimo zvinofanirwa kuve zvinodzidzisa kwazvo, kudzidzisa, uye / kana kuvaraidza. Chechipiri, zviziviso zvemuno zvinotarisirwa kuve zvine chinangwa uye zvisina kusarura. Iyo poindi ndeyekuita mhedzisiro inotungamirwa nedata uye kutsigira zvirevo zvako neumboo.
Panguva imwecheteyo, zvawatumira zvinofanirwa kuve zvakakwana maererano nesipereti uye girama. Kanganiso kamwe chete kunogona kukanganisa mukurumbira wako, saka zviri nani utarise chidimbu chimwe nechimwe chezvinyorwa kaviri usati waenda kunorarama. Kana kuverenga kuverenga kusiri chinhu chako, tinokukurudzira kuti ushandise mapuratifomu edhijitari senge Grammarly or Hemingway.
Zano # 3: Gadzirira peji rekumhara
Chinangwa chekupedzisira cheshambadziro dzese dzemuno kuendesa vashandisi kune inoenderana peji yekumhara. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti yako peji yekumhara inokodzera meseji yezvinyorwa iwe zvawakagadzira.
Izvo zvakakosha kuti ushandise iwo iwo maitiro uye toni yekunyora kuteedzera kuitira kuti uve nechokwadi chakakwana chikamu chekumaka kusagadzikana. Ehezve, iyo yekumhara peji inofanirwa kusimudzira chigadzirwa kana sevhisi yako tarisiro yaunoverenga nezvayo.
Chekupedzisira, peji rino rinofanirwa kuve neakajeka uye anoonekera kudana kune chiito (CTA). Bhatani rakamiswa zvakanaka reCTA rinopa vashanyi mamwe maratidziro uye rinovaratidza maitiro ekumhara pakumhara.
Zano # 4: Edza kugadzirisa
Zano rekupedzisira pane yedu runyorwa kuyera mhedzisiro yezvako zvekushambadzira zvemukati nekuti ndiyo chete nzira yekuvandudza mamangwana emakampeni. Iri basa riri nyore kwazvo kana iwe ukamisa zvinangwa zvakanaka uye woona makiyi ekuita zviratidzo (KPI).
Kazhinji kutaura, vazhinji vevashambadzi vanotarisa pamatanho maviri - maonero uye kudzvanya. Kunyange maKPIs maviri achinyatso kukosha, tinokurudzira kutarisa pachinhu chechitatu chinonyatsoburitsa pachena kubudirira kana kukundikana kwemushandirapamwe wako. Tiri kutaura nezve post-tinya kubatanidzwa, yakakosha paramende inoratidza zvakajeka mashandiro emuno kushambadzira.
Zvemukati zvisikwa ndeimwe yemafungiro ekushambadzira akakurisa enguva yedu, asi hazvisi nyore kuwana nzvimbo yako muzuva redhijitari nevakwikwidzi vazhinji munzvimbo dzese. Apa ndipo panoparidzirwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kubatsira mabhizinesi mukusimudzira mushandirapamwe.
Mune ino posvo, isu takatsanangura pfungwa yekuzvarwa kushambadza uye tikakuratidza nzira ina dzekubudirira kuzvibatanidza pamwe nezviri kushambadzira. Iwe unofanirwa kushandisa aya matipi uye manomano ekugadzira zvirinani zvemuno zvekushambadzira macampaign, asi ita shuwa yekunyora chirevo kana iwe uchida mamwe mazano kubva kudivi redu - isu tinofara kupindura!
Tags: kushambadzira kwazvinotsananguro yekushambadzira yemunozvizvarwa zvekushambadzirazvizvarwa zvekushambadzira matipizvizvarwa zvekuratidzira kushambadziraoutbrainevanhu vezvenhauakakurudzira zvemukati
Alice Jones mutengesi wedhijitari anobva kuSan Francisco, California. Ari kunyora blog mablog ezvakanakisa tangazve masevhisi nemasangano ekugadzira zvemukati. Alice ndiye amai vevacheche vaviri uye anofarira eyoga murapi.
Chii chinonzi IP Inodziya?